Waa maxay sababta Jamaica? Jawaabta Maraykanka La -talin "Ha Safrin"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Waa maxay sababta Jamaica? Jawaabta Maraykanka La -talinta “Ha Safrin”
Airlines • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Waa maxay sababta Jamaica? Jawaabta Maraykanka La -talinta “Ha Safrin”
Dhaqaalaha Jamaica wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay safarka iyo dalxiiska. Digniinta safarka ee Heerka 4 ee Mareykanka ayaa niyad jab weyn iyo halis ku ah qaranka jasiiradda. Qaar badan oo ka mid ah ayaa shaqeeya waxayna ku tiirsan yihiin samaqabka warshadaha safarka iyo dalxiiska, dadka Mareykankana waa kuwa ugu badan ee soo booqda.
Waaxda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka oo kaashanaysa CDC ayaa soo saartay La -talin Socdaal Heerka 4 ah oo loogu talagalay Jamaica.
La -talinta Heerka 4 waa la -talinta ugu sarreysa silsiladda waxayna micnaheedu tahay dadka Mareykanka “Ha safrin.”
Wasiirka dalxiiska ee Jamaica ayaa ka jawaabaya digniintan qoraal la sii daayay eTurboNews maanta.
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa soo saaray bayaankan la xiriira Mareykanka oo soo saaray La -talin “Ha Safrin” oo ka dhan ah Jamaica:
Jamaica ayaa dhowaan soo dhaweysay booqashadeeda hal-milyan ah tan iyo markii dib loo furay socdaalka Juun 2020, booqdayaashu waxay dareemi karaan kalsooni inay ogaadaan in Jidadka Resilient Jamaica-oo daboolaya in ka badan boqolkiiba 85 waxsoosaarka dalxiiska jasiiradda oo ay ku jiraan wax ka yar boqolkiiba hal dadkeenna- diiwaangeliyey heerka caabuqa COVID-19 wax ka yar hal boqolkiiba sannadkii la soo dhaafay.
Tan waxaa lagu gaaray borotokoollo adag oo la soo saaray iyadoo lala kaashanayo mas'uuliyiinta qaybaha caafimaadka iyo dalxiiska. Hab -maamuusyadani waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu horreeyey ee helay Aqoonsiga Safarrada Nabadda ee Golaha Socdaalka & Dalxiiska ee noo oggolaaday inaan si ammaan ah dib ugu furno Juun 2020.
Caafimaadka iyo nabadgelyada qof kasta oo reer Jamaica ah iyo booqde kasta oo dalka ah ayaa weli ah ahmiyaddeenna ugu sarreysa, waxaanna filaynaa in heerka Heerka 4 ee Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada ee Mareykanka (CDC) uu noqon doono mid gaaban.
In kasta oo Jamaica ay ka mid tahay 77 waddan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan qaar badan oo ka mid ah walaalaheena Kariibiyaanka, si ay u helaan magacaabista Heerka 4, haddana waxaan ku kalsoonahay in Waddooyinkeenna iyo baratakoolyadeenna adkeysiga ay sii wadi doonaan inay nagu qaadaan waddada saxda ah.
Mareykanka ayaa digniino socdaal oo heer 4 ah siiyay dalal badan oo Caribbean-ka ah oo ku tiirsan dalxiiska.
Markay soo saareyso La -talinta Socdaalka Ha Safrin, dawladda Mareykanka ayaa maanta ka tagtay qayb intee le'eg ayay tahay in la booqdo Jamaica marka la barbar dhigo Florida ama Hawaii - marka laga hadlayo halista caabuqyada COVID.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, kaliya maahan hoggaamiye maxalli ah oo dalkiisa u dhashay laakiin abuuritaankiisa Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Dhibaatada, Jamaica waxay hormuud ka ahayd adduunka marka laga hadlayo dalxiiska nabdoon iyo qalalaasaha.
The Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) soo saaray a Heerka 4 Caafimaadka Safarka Ogeysiis ay sabab u tahay COVID-19, oo muujinaya heer aad u sarreeya oo COVID-19 ah oo dalka ka jira. Khatartaada inaad ku dhacdo COVID-19 iyo inaad yeelato astaamo daran ayaa laga yaabaa inay yaraato haddii aad si buuxda u tallaasho Tallaalka la oggolaaday ee FDA. Kahor intaadan qorsheyn safar kasta oo caalami ah, fadlan dib u eeg talooyinka gaarka ah ee CDC ee la tallaalay iyo aan la tallaalin socotada. Booqo Safaaradda Bogga COVID-19 si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan COVID-19 gudaha Jamaica.
Ha u safrin:
Meelaha hoos ku qoran ee Kingston sababtuna waa dembiyada.
Meelaha hoos ku qoran ee Montego Bay sababtuna waa dembiyada.
Magaalada Isbaanish sababtoo ah dembiyada.
Soo -koobidda Dalka: Dambiyada rabshadaha wata, sida duullaanka guriga, dhaca hubaysan, faraxumaynta galmada, iyo dilalka ayaa caadi ah. Weerarada galmadu si joogto ah ayay u dhacaan, oo ay ku jiraan meelaha loo dalxiis tago oo dhan. Booliska maxalliga ahi ma haystaan ​​agabkii ay si wax -ku -ool ah uga jawaabi lahaayeen dhacdooyinka dambiyada culus. Adeegyada deg -degga ahi way ku kala duwan yihiin jasiiradda oo dhan, waqtiyada jawaab -celintuna way ka duwanaan karaan heerarka Maraykanka. Shaqaalaha dawladda Mareykanka waxaa laga mamnuucay inay u safraan meelaha hoos ku taxan, inay isticmaalaan basaska dadweynaha, iyo inay baabuur kaxeeyaan meel ka baxsan aagga Kingston habeenkii.
Mareykanka ayaa digniino kuwaan la mid ah ka soo saaray deriska kale ee Caribbean -ka, oo ay ku jiraan Bahamas.